ESI EME KA BIOS MELITE NA GIGABYTE - BIOS - 2020
N'agbanyeghị eziokwu na interface na ọrụ BIOS enwebeghị mgbanwe dị ukwuu site na mbido mbụ (afọ 80), na ụfọdụ ụfọdụ ọ na-atụ aro iji melite ya. Dabere na motherboard, usoro nwere ike ime na ụzọ dị iche iche.
Maka mmelite ziri ezi ị ga - ebudata nsụgharị ahụ dị mkpa maka kọmputa gị. A na-atụ aro ka ị budata nsụgharị BIOS dị ugbu a ọ bụrụ na ikpe. Iji mee ka melite usoro ọkọlọtọ, ọ dịghị ihe omume na ọrụ dị mkpa ka ebudatara, ebe ọ bụ na ihe niile ịchọrọ bụ nke e wuru n'ime usoro.
Ị nwere ike imelite BIOS site na sistemụ arụmọrụ, mana nke a anaghị adị mma mgbe nile ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya, mee ya na nsogbu gị na ihe ize ndụ gị.
Nkeji nke 1: Nkwadebe
Ugbu a, ị ga-achọ ịmụta ihe ndị bụ isi gbasara ụdị BIOS dị ugbu a na motherboard. A ga-achọ nke a iji budata nhazi nke ugbu a site na BIOS Onye Mmepụta site na saịtị ha. Enwere ike igosi data nke mmasị na iji ngwaọrụ Windows ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ na-adịghị etinye n'ime os. Ndị nke ikpeazụ nwere ike imeri n'ọhụụ nke interface dị mfe.
Iji nweta data dị mkpa, ị nwere ike iji ọrụ dị ka AIDA64. Ọrụ ya maka nke a ga-ezuru ezu, usoro ihe omume ahụ nwekwara interface dị ọcha Russia. Otú ọ dị, a na-akwụ ya ma na njedebe oge ngosi ahụ ị nweghị ike iji ya na-enweghị mmalite. Iji lee ozi, jiri ndụmọdụ ndị a:
Mepee AIDA64 wee gaa "Board System". Ị nwere ike iji ebe akara ahụ na ibe ma ọ bụ ihe kwekọrọ na menu na aka ekpe.
N'otu ụzọ ahụ, mepee tab "BIOS".
Ihe data dị ka mbipụta BIOS, aha ụlọ ọrụ-onye mmepụta na ụbọchị nke mbipute mbipụta nwere ike ile anya na ngalaba "Njirimara BIOS" ma "Ebube BIOS". Ọ bụ ihe amamihe dị na icheta ma ọ bụ dee ozi a ebe.
Ịnwekwara ike ibudata nsụgharị BIOS kachasị ọhụrụ (dịka usoro ihe omume ahụ) site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị mmepe na-eji njikọ na-abụghị "Mmelite BIOS". N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ n'ezie akwụkwọ kachasị ọhụrụ na kachasị mma maka kọmputa gị.
Ugbu a, ị ga-aga ngalaba "Board System" site n'iji ya tụnyere paragraf nke abụọ. Enwere aha nne motherboard gị na akara ahụ "Board System". Ị ga-achọ ya ma ọ bụrụ na ị kpebie ịchọ na ibudata mmelite onwe gị site na ebe nrụọrụ weebụ Gigabyte isi.
Ọ bụrụ na ị kpebie ibudata faịlụ melite n'onwe gị, ọ bụghị site na njikọ site na AIDS, mgbe ahụ jiri obere ntụziaka a ibudata nsụgharị arụmọrụ nke ọma:
Na Gigabyte gọọmentị gọọmenti, chọta isi (top) menu wee gawa "Nkwado".
Na ibe ọhụrụ ga-apụta ọtụtụ mpaghara. Ịkwesịrị ịkpụ otu ihe nlereanya nke motherboard gị n'ọhịa Download ma malite ịchọ.
Na nsonaazụ, rịba ama tab BIOS. Weghachie ebe a na-edebe ihe.
Ọ bụrụ na ịchọta ebe nchekwa ọzọ na nsụgharị BIOS gị ugbu a, wee budata ya. Nke a ga-enye gị ohere ịlaghachi n'oge ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịwụnye na-eji usoro atumatu, ị ga-achọ mgbasa ozi nke dịpụrụ adịpụ, dịka igwefoto ọkụ ma ọ bụ CD / DVD. A ghaghị ịhazi ya FAT32mgbe nke ahụ gasịrị ị nwere ike ịnyefe faịlụ site na ebe nchekwa na BIOS. Mgbe ị na-akpụgharị faịlụ, jide n'aka na ị ga-ege ntị n'eziokwu bụ na n'etiti ha bụ ihe ndị dị mkpa dịka ROM na BIO.
Nkeji nke 2: Na-enwu gbaa
Mgbe ị rụchara ọrụ ịkwadebe, ị nwere ike ịga ozugbo na nwelite BIOS. Iji mee nke a, ọ dịghị mkpa ka ịpụpụsịa ọkụ mbanye ahụ, wee gaa nzọụkwụ na-esonụ site na ntụziaka ozugbo ozugbo a naferefe faịlụ na mgbasa ozi:
Ná mmalite, a na-atụ aro ka ịmepụta kọmputa dị mkpa nke bu ụzọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eme usoro a site na USB flash drive. Iji mee nke a, gaa na BIOS.
N'ịntanetị BIOS, kama ikuku siri ike, họrọ mgbasa ozi gị.
Iji chekwaa mgbanwe ma weghagharịa kọmputa ahụ, jiri ihe dị na menu kachasị elu "Zọpụta & Ọpụpụ" ma ọ bụ hotkey F10. Nke a anaghị arụ ọrụ mgbe niile.
Kama ịkwanye sistemụ arụmọrụ, kọmputa ahụ ga-amalite windo mbanye wee nye gị ọtụtụ nhọrọ maka ịme ya. Iji mee ka melite site na iji ihe "Melite BIOS site na ngwa"E kwesịrị icheta na dabere na mbipụta BIOS nke ị na-arụ ugbu a, aha nke ihe a nwere ike ịdịtụ iche, ma ihe ahụ kwesịrị ịnọgide na-adị otu.
Mgbe ị gafere mpaghara a, a ga-agwa gị ka ịhọrọ nsụgharị nke ịchọrọ ịkwalite. Ebe ọ bụ na ọkụ mbanye ga-enwe mbipụta mberede nke mbipute nke ugbu a (ọ bụrụ na ị mere ya ma ziga ya na mgbasa ozi), kpachara anya na nzọụkwụ a ma ghara ịkọgharị ụdị ahụ. Mgbe ịhọrọ mmelite ahụ kwesịrị ịmalite, nke ga-ewe ihe karịrị oge ole na ole.
Ihe Ọmụmụ: Ịwụnye akpụkpọ ụkwụ site na windo
Mgbe ụfọdụ, akara iwu DOS meghere. Na nke a, ịkwesịrị ịkwọ ụgbọala na-esonụ ebe ahụ:
Ebee ka amaokwu dị iche iche, ịkwesịrị ịkọwa aha faịlụ ahụ na mbipụta ọhụrụ ahụ, nke bụ BIO agbatị. Ihe nlele:
Nzọụkwụ 2: Nwelite site na Windows
Ndị Gigabyte nne na nna nwere ikike iji melite iji ngwanrọ nke atọ site na Windows interface. Iji mee nke a, ịkwesịrị ibudata ọrụ pụrụ iche @BIOS na (ọkacha mma) ihe nchekwa na nsụgharị ugbu a. Mgbe nke ahụ, ị ​​nwere ike ịga n'ihu site na ntụziaka ntụziaka:
Download GIGABYTE @BIOS
Gbaa usoro ihe omume a. The interface nwere naanị 4 bọtịnụ. Iji melite BIOS ị chọrọ iji nanị abụọ.
Ọ bụrụ na ịchọọ ịmegbubiga onwe gị ókè, mgbe ahụ jiri bọtịnụ mbụ - "Melite BIOS site na GIGABYTE Server". Usoro ihe omume ahụ ga-achọpụta na ọ ga-adị mma ma dozie ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịhọrọ nke a, enwere ike itinye nkwụnye na arụmọrụ nke ngwa ngwa n'ọdịnihu.
Dịka okwu na-adịghị ize ndụ, ịnwere ike iji bọtịnụ ahụ "Melite BIOS site na faịlụ". N'okwu a, ị ga-agwa usoro ihe omume ahụ faịlụ ị ibudatara na mgbakwunye BIO ma chere maka mmelite ahụ iji mezue.
Usoro dum nwere ike na-ewe nkeji iri na ise, mgbe kọmputa ahụ ga-amalitegharịa ugboro ugboro.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji weghachite ma melite BIOS nanị site na interface DOS na ụlọ ọrụ ndị wuru na BIOS n'onwe ya. Mgbe ị na-eme usoro a site na sistemụ arụmọrụ, ị na-agba ọsọ nke ịkụda arụmọrụ nke kọmputa na ọdịnihu, ma ọ bụrụ na mberede n'oge nkwalite ahụhụ na-apụta na usoro.